Black Shark 2, famakafakana ary fitsapana ny faran'ny lalao gaming tsara indrindra | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia nomenay ianao ny fiheverana voalohany momba ny Black Shark 2, ny andiany faharoa amin'ny terminal izay manome fahafaham-po ny filan'ny mpitia lalao video faran'izay madio, dia noforonin'i sy hilalaovana azy io nefa tsy misy fetra na kely aza. mandalo fahatsapana voalohany ianao hahazoana hevitra momba izay ho hitanao izao.
Tonga ny fotoana, napetrakay tamin'ny andrana ny Black Shark 2, ho hitanao miaraka aminay ny fomba fivezivezeny rehefa milalao lalao, ny fomba fitondran-tena sisa tavela amin'ny fahaizany ary mazava ho azy ny fahombiazan'ny fakantsary. Mijanona miaraka aminay amin'ity fanadihadihana lalina an'ny Black Shark 2, ilay terminal lalao Android quintessential ity.
Black Shark 2, fiheverana voalohany an'ity biby lalao ity
Toy ny mahazatra, na dia efa fantatrao aza izany, ny handaozanay anao manaraka dia ny famaritana amin'ny ambaratonga fitaovana, ary miaraka aminy tena tsara. Na izany aza, Tena mamporisika anao aho handeha amin'ny alàlan'ny horonantsary mitarika an'ity famakafakana ity, Eo no hahitanao ny zava-misy henjana amin'ny fitondrantenan'ny Black Shark 2 amin'ny toe-javatra samihafa, manomboka amin'ny tena fampisehoana amin'ny lalao video ka hatramin'ny fakan-tsary, angamba ny lafiny ratsy indrindra amin'ity terminal ity afaka mividy ianao HERE ny vidiny tsara indrindra.
Famaritana ara-teknika Black Shark 2
efijery 6.39 "AMOLED - 1080 x 2340 (Full HD +) vahaolana ho an'ny 403 DPI
Processor sy GPU Snapdragon 855 - Adreno 640
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsary Dual 12 MP miaraka amin'ny f / 1.75y miaraka amin'i AI - Zoom x2 sy Portrait
Fakan-tsary aloha MP 20 miaraka amin'ny f / 2.0
Fifandraisana sy fanampiny WiFi ac - Bluetooth 5.0 - aptX sy aptX HD - Dual GPS
fiarovana Mpamaky ny tanan-tanan-tanana - Famantaran'ny tarehy mahazatra
bateria 4.000 mAh miaraka amin'ny Quick Charge 4.0 - 27W amin'ny alàlan'ny USB-C
vidiny Avy amin'ny 549 euro
1 Ny refin'ny terminal, olana isan'andro?
2 Natao hilalao fisaorana an'i Shark Space
3 Ny heviny malemy: Ny fakantsary
4 Multimédia sy fahaleovan-tena, ho anao io
Ny refin'ny terminal, olana isan'andro?
Mazava ny zava-misy, manana ny Black Shark 2 refesin'ny 163,61 x 75 x 8,77 milimetatra, misongadina ambonin'izany rehetra izany hateviny, izay manana lanja mihoatra ny 200 grama amin'ny fitambarany. Miatrika finday tsy azo lavina isika fa miaraka amin'ny endriny ambany sy ambony eo amin'ny efijery no mahatonga azy ho lehibe, izany dia saika tsy ho vita mihitsy amin'ny fampiasana azy amin'ny tanana tokana, noho izany, raha mieritreritra bebe kokoa momba ny terminal isan'andro ianao fa amin'ny telefaona finday no lalaovina dia mety manao fahadisoana lehibe tokoa ianao. Na izany aza, tsy ny zava-drehetra no ratsy amin'ny haavon'ny famolavolana, ary ho an'ny tanjony, mety izany.
Mampifangaro vera sy metaly izy io, afangaro amin'ny fomba mamela antsika hametraka azy eo amin'ny lafiny marindrano ary tena mahafinaritra ny tanana, midika izany fa tena mahazo aina raha ny milalao no tadiavintsika, ny tahan'ny efijery dia mahatonga fampiasana azy amin'ny maody panoramic dia fahafinaretana. Rehefa milalao marimarina kokoa isika rehefa mahita ny tena votoatiny. Na izany aza, tsy maintsy nolazaiko nandritra ity herinandro mafana ity fa efa nandramako izany Niakatra kely ny maripana, na dia manjary manelingelina aza indraindray, na dia tsy mihoatra ny terminal hafa toa ny iPhone X aza, fa misarika ny saina bebe kokoa rehefa tsaroantsika fa manana rafitra mangatsiaka misy patanty izy io.
Natao hilalao fisaorana an'i Shark Space
Eto no tena manomboka mamirapiratra amin'ny hazavany ny Black Shark 2, ary tsy noho ny logo any aoriana sy ny LED roa fotsiny izay azo fehezina amin'ny fahafinaretana ao anatin'ny sehatra, fa satria manana ny zavatra ilainao rehetra ianao mandeha miaraka ny hardware sy ny logiciel mitady traikefan'ny mpampiasa mifanaraka kokoa amin'ny filan'io, Andao hojerentsika ireo fiasa rehetra nahasarika ny saintsika:
Tompon'ny fikasihana: Miaraka amin'izany, ny telefaona dia mora tohina amin'ny tsindry amin'ny faritra sasany amin'ny efijery, fanampin-javatra mahaliana izay tsy araraotin'ny mpamorona
Famelomana 240Hz amin'ny tontonana mikasika: Rehefa mavitrika amin'ny maodin-dalao isika dia mahita ny valiny amin'ny paikady lehibe indrindra azontsika alaina sary an-tsaina, somary tsikaritra izany rehefa milalao indrindra ny lalao video sy ny mpitifitra.
El motera hovitrovitra namboarina: Tsy isalasalana fa, araka ny nolazaiko tao amin'ny horonantsary, iray amin'ireo tsara indrindra hitako tamin'ny Android, saika manahaka tanteraka ny 3D Touch an'ny iPhone indray izy io, azo antoka fa tratra ary ahazoana aina tokoa ny traikefa filalaovana.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny dera dia mankany amin'ny Toerana antsantsa, ny tontolon'ny fitantanana ny lalao video ahafahantsika miditra amin'ny bokotra eo anilany, izay hananantsika ireto asa manaraka ireto:
Lalao Dock: Birao misy carousel miaraka amin'ireo lalao video napetrakay.
Studio mpilalao: Fizarana midina izay ahafahantsika mitantana ny Master Touch, afaho ny RAM, ampifanaraho ny fampandrenesana ary ampifanaraho koa ny fanaraha-maso. Tsara ny manamarika fa tsy afaka miresaka momba ny fanaraha-maso isika satria tsy afaka nisedra azy ireo ankoatra ny fampisehoana ny Black Shark tany Madrid, noho izany dia mbola tsy afaka mitsara an'ity fizarana ity isika.
Fampahalalana momba ny FPS, ny mari-pana amin'ny terminal ary na ny fampisehoana aza.
Eto no asehon'ny Black Shark 2 ny tratrany, ilay interface tsara mifangaro izay hitako tao amin'ny terminal finday ho an'ny lalao video Ary izany no manome an'ity terminal ity ny antony rehetra, namboarina ho an'ireo mpampiasa be mpitady indrindra rehefa milalao amin'ny finday Android-ny, tsy ho diso antony hividianana azy ianao raha noho io antony io.
Ny heviny malemy: Ny fakantsary
Tsy maintsy nisy fiatraikany ratsy raha mandinika ny vidiny isika. Ny voalohany dia miharihary, manana fakantsary mahazatra kokoa an'ny elanelam-potoana izy ary mampatsiahy haingana antsika ny orinasa sinoa ianteherany, Xiaomi. Manana rafitra fakan-tsary roa izahay ao aoriana, izy ireo dia avy MP 12 miaraka amina aperture f / 1.75 ary ny iray amin'izy ireo dia manana solomaso telephoto ho an'ny Zoom x2. Mitovy amin'ny an'ny Xiaomi ny interface ary mamporisika anao aho hijery ilay horonan-tsary hijerena ny fomba fiasan'izy amin'ny antsipiriany kokoa. Manomboka amin'ny sary mahazatra izahay, miaro tena amin'ny toe-javatra mahazatra, na dia azo hatsaraina foana amin'ny alàlan'ny fampiasana HDR, na izany aza, tsy azo lazaina hoe manatsara mihoatra ny mahasalama ny loko kely ary mampihena ny famirapiratry ny sary.
Izy io dia mijaly amin'ny seho miharihary na ny fiovan'ny jiro, mampiseho tabataba mahazatra azy, fakantsary afovoany. Mazava ho azy fa manana ny maody Art intelligence Intelligence isika, izay toa ahy indray fa sivana tsotra izay mameno ny loko kokoa raha azo atao, saingy tsy maintsy ekena fa manintona kokoa ny sary (na dia tsy misy fotony aza). Raha ny maody fakana sary dia ahitantsika profiling mendrika, tohanan'ny rindrambaiko mazava tsara, manome valiny ampy izy io ary kely ny azo omena tsiny amin'ny toe-jiro tsara. Toy izany koa no mitranga amin'ireo fakantsary amin'ny toe-jiro ambany, mahavariana ny fomba iatrehany ireo toe-javatra ireo, miaraka amin'ny fanodinana be loatra eny, fa ... ilaina amin'ny tranga maivana izany, tena porofo izany.
Mikasika ny fakantsary selfie hitantsika sensor 20 MP tokana miaraka amina f / 2.0 miaro tena, manana ny ankamaroan'ny fahaizan'ny sensor aoriana ary hamela antsika haka selfie tsindraindray. Ho an'ireo tambajotra sosialy tsy misy haingam-pandeha, tsy misongadina amin'ny tsara, na amin'ny ratsy. Ary farany, amin'ity terminal ity dia azontsika atao ny manoratra atiny ao amin'ny 4K sy amin'ny 1080p amin'ny 30 FPS amin'ny fomba marimaritra iraisana, tsy nahita olana izahay tamin'ny fampiasana azy na nilatsahan'ny kalitao, na izany aza, tsy manana fanamafisana mekanika izahay ary mampiseho izany . Ny mikrô dia manoratra feo ao anaty fantsona tokana ary azonao atao koa ny mahita ny valiny farany mivantana amin'ny horonan-tsary izay mitarika an'ity famakafakana ity hamoaka fehin-kevitrao manokana.
Multimédia sy fahaleovan-tena, ho anao io
Ny efijery dia mety, mahita famirapiratana ampy isika saika amin'ny toe-javatra isan'andro izay mamela antsika handany atiny audiovisual amin'ny vahaolana Full HD misy HDR, madio tanteraka ny mainty ary ny takelaka fanaingoana azy ao amin'ny faritra fanamoriana dia ahafahantsika mivoaka miaraka amin'ny tototry ny loko mahazatra. izay manolotra an'ity karazana efijery ity amin'ny ankapobeny. Somary mamontsina ny feo, mahita feo stereo mahery isika eny, saingy am-bifotsy am-bifotsy ary very kalitao rehefa mampitombo ny feontsika. Ho afaka handre ny zava-drehetra amin'ny fomba tonga lafatra ianao, saingy miaraka amin'ny latsaka kalitao.
Raha ny fizakantena, inona no antenaina. Manana 4.000 mAh izay toa tsara izahay na dia milalao fotoana mahafinaritra aza. Tamin'ny fitsapana nataoko dia nahatratra efijery 7 sy 8 mora foana izahay, Ka rehefa milalao isika dia hahatratra ny andro iray hampiasana, roa andro raha toa ka mampiasa mahazatra ny telefaona. Aza adino fa tsy manana seranan-tsambo Jack 3,5mm isika, fa manana adaptatera USB-C.
Ny famolavolana sy ny fitaovana dia miaraka miaraka tanteraka, sarotra ny manatsara azy
Miavaka ny fizakan-tena na dia milalao aza isika
Ny fampidirana rindrambaiko saika madio dia mampifaly ny fampiasana azy
Ny vidiny dia afa-po amin'ny fijerena ny tsena
Ny fakan-tsary dia mahazatra kokoa amin'ny elanelam-potoana
Mavesatra sy lehibe izy io, tsy azo ampiasaina amin'ny tanana iray
Nanantena ny tontonana 120 Hz izahay
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Black Shark 2, famakafakana ary fitsapana ny fahombiazan'ny terminal terminal
Ny Redmi K20 dia mamaky AnTuTu miaraka amin'ny Snapdragon 855 mahery
Android R dia hampiditra pikantsary nitarina